Boorama-(giriyaadnews)-Maayarka Magaalada Boorama ayaa maanta wacdaro ka muujiyay garoonka Khayriyada ee magaalda Boorama kadib markii uu qayb libaax ka qaatay ciyaar xiiso badan oo dhex martay laba kooxood oo ah waayeelka Cuslaaday oo ku kala ciyaaryaya Mgacyada Telesom iyo Dawlada Hoose. ciyaartan oo ahayd mid aad ay dadwaynihii daawanayay ula dhaceen ayaa waxa ay ahayd mid madadaalo ah oo dadka ku suganaa garoonku ay sawaxan sacab iyo qaylo isku dareen markii ay ciyaartu sootay.
Marka loo yimaad ciyaartii maanta ayaa waxa loo aqoonsaday xidiga garoonka intii ciyaartu socotay Maayarka Magaalada Boorama Cabdi Shide Bile oo isagu shabaga la hubsaday goolkii ugu horeeyay ee ciyaarta kadib markii uu kubadf quruxbadan si fiican u daba mariyay gool hayaha kooxda Telesom.
Dhinaca kooxda Telesom waxa la xusi karaan Eng. Silig oo isagu ahaa mid qaab ciyaareedkiisu uu wali is hayo ayaa waxa uu shabaga la hubsaday 3 gool oo ka mid ah goolasha ay Telesom DHalisay,
sikastaba ha ahaatee ciyaartii maanta oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxa ay ku dhamaatay 6:5 ay guushu ku raacday kooxda Dawlada Hoose ee Boorama waxana ay ciyaartani ahayd mid ku soo beegantay maalmaha nasashada ah ee koobka Sh. Muuse Jaamac Goodaad
Maxamed BiliBili-giriyaadnews borama
« “Waxaannu taageersannahay go`aankii Sul. Samatar, arrimaha dhaqankana odayaasha ha looga danbeeyo” dhallinyarada beelaha Maxamad case halkan ka daawo warkii uu soo ban dhigay tv nashnaal somaliland video »